Jerry O’Connell – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Justice League Dark: Apokolips War (2020) Unicode Justice League: War ကနေ စတငျပွီး ဖွဈပျေါလာခဲ့တဲ့DC Animated Universe (DCAU) ရဲ့ နောကျဆုံးကားပါ။ပိုးစိုးပကျစကျကွမျးပါတယျ။ဒီစီဖနျတှေ ကွညျ့ရကျစရာမရှိလောကျအောငျ ကွမျးမှာဖွဈပါတယျ။ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ Justice League အဖှဲ့တှကေ Darkseid ကမ်ဘာဂွိုဟျဆီ လာကြူးကြျောဖို့ အစပြိုးနတောကို သိသှားပွီးတဲ့နောကျသူတို့ဘကျက လကျဦးမှုအရငျရအောငျ စူပါမငျးက ဦးဆောငျပွီးApokolips ဂွိုဟျကို သှားတိုကျကွတာပါ။ကံဆိုးခငျြတော့ Darkseid ကသူတို့ရဲ့အစီအစဉျတိုငျးကို ကွိုသိနတေဲ့အခါ မရှုမလှရှုံးသှားကွတယျ။ကမ်ဘာဂွိုဟျလညျး Darkseid လကျအောကျကရြောကျသှားခဲ့တယျ။အဲဒီနောကျပိုငျး ၂ နှဈအကွာကို ဇာတျအိမျတညျထားတာပါ။Justice League အဖှဲ့တှေ Darkseid နဲ့ရငျဆိုငျပွီးဘာတှဖွေဈကုနျလဲဆိုတာ Flashpoint ထကျကွမျးတဲ့ ဒီ Apokolips War မှာ ကွညျ့ရှုရမှာဖွဈပါတယျ။ Credit Review Zawgyi Justice League: War ကနေ စတင်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့DC Animated Universe (DCAU) ရဲ့ နောက်ဆုံးကားပါ။ပိုးစိုးပက်စက်ကြမ်းပါတယ်။ဒီစီဖန်တွေ ကြည့်ရက်စရာမရှိလောက်အောင် ကြမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ Justice League ...
IMDB: 7.9/10 9325 votes
The Death and Return of Superman (2019) Unicode မတျထရိုပေါလဈမွို့တျောကွီးကိုကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့စူပါမနျးတဈယောကျဟာဆိုရငျ တဈမွို့လုံးရဲ့အခဈြတျောသူရဲကောငျးတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ အမွဲပွညျသူတှအေတှကျမားမားမတျမတျကာကှယျပေးနခေဲ့တဲ့စူပါမနျးတဈယောကျ သူခဈြရတဲ့မွို့တျောကွီးကိုကမ်ဘာပကျြသှားသလားထငျရအောငျ ကွောကျစရာကောငျးစှာဖကျြဆီးတဲ့ဂွိုလျသားတဈယောကျနဲ့ရငျဆိုငျတိုကျခိုကျခဲ့ရာကနေ အဆုံးသတျမှာ အောငျမွငျစှာတိုကျခိုကျနိုငျခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့အသကျကိုပါပေးဆပျလိုကျရပါတော့တယျ။ စူပါမနျးသဆေုံးမှုဟာ တဈမွို့လုံးအတှကျတော့ဖွမေဆယျနိုငျတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကွီးတဈခုအလား ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စူပါမနျးအလောငျးဟာရုတျတရကျပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ နောကျထပျပုံစံမြိုးနဲ့စူပါမနျးတှပွေနျလညျရောကျရှိလို့လာခဲ့ပါတယျ။ သူတို့ကဘယျသူတှလေဲ???? ဘာကွောငျ့မွို့ကိုကာကှယျပေးရတဲ့သူရဲကောငျးအလုပျကိုလုပျရတာလဲဆိုတာ ဇာတျကားကိုကွညျ့ရှုရငျးနဲ့အဖွရှောလိုကျရအောငျဗြာ။ Credit Review Zawgyi မတ်ထရိုပေါလစ်မြို့တော်ကြီးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့စူပါမန်းတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် တစ်မြို့လုံးရဲ့အချစ်တော်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲပြည်သူတွေအတွက်မားမားမတ်မတ်ကာကွယ်ပေးနေခဲ့တဲ့စူပါမန်းတစ်ယောက် သူချစ်ရတဲ့မြို့တော်ကြီးကိုကမ္ဘာပျက်သွားသလားထင်ရအောင် ကြောက်စရာကောင်းစွာဖျက်ဆီးတဲ့ဂြိုလ်သားတစ်ယောက်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကနေ အဆုံးသတ်မှာ အောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့အသက်ကိုပါပေးဆပ်လိုက်ရပါတော့တယ်။ စူပါမန်းသေဆုံးမှုဟာ တစ်မြို့လုံးအတွက်တော့ဖြေမဆယ်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုကြီးတစ်ခုအလား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စူပါမန်းအလောင်းဟာရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက် နောက်ထပ်ပုံစံမျိုးနဲ့စူပါမန်းတွေပြန်လည်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲ???? ဘာကြောင့်မြို့ကိုကာကွယ်ပေးရတဲ့သူရဲကောင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရတာလဲဆိုတာ ဇာတ်ကားကိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့အဖြေရှာလိုက်ရအောင်ဗျာ။ Credit Review
The Death of Superman (2018) Unicode Justice League ရဲ့ကာကှယျစောငျ့ရှောကျမှုနဲ့အတူ ငွိမျခမျြးစပွုနတေဲ့ကမ်ဘာကွီးကို ထူးဆနျးတဲ့ဥက်ကာပြံတဈစငျး ကရြောကျလာပါတယျ။ အဲဒီဥက်ကာပြံထဲမှာ ပါလာတဲ့သူကတော့ Superman ရဲ့ရနျသူတျောကွီး Doomsday ပါဝငျလာပါတယျ။ Doomsday ဟာဖကျြဆီးဖို့ရညျရှယျခကျြတဈခုတညျးနဲ့သာ အဖနျတီးခံခဲ့ရတဲ့ အဖကျြလကျနကျကွီးတဈခုပါ။ ကမ်ဘာကွီးပျေါကရြောကျလာတဲ့ အဲဒီအဖကျြလကျနကျရနျစှယျတှကေနေ Justice League ကရောကယျတငျနိုငျပါ့မလား။ ဘယျသူတှရေဲ့အသကျတှကေို ဘယျလိုပေးဆပျရဦးမှာလဲ ဆိုတာတော့....။ Credit Review Zawgyi Justice League ရဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနဲ့အတူ ငြိမ်ချမ်းစပြုနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးကို ထူးဆန်းတဲ့ဥက္ကာပျံတစ်စင်း ကျရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီဥက္ကာပျံထဲမှာ ပါလာတဲ့သူကတော့ Superman ရဲ့ရန်သူတော်ကြီး Doomsday ပါဝင်လာပါတယ်။ Doomsday ဟာဖျက်ဆီးဖို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့သာ အဖန်တီးခံခဲ့ရတဲ့ အဖျက်လက်နက်ကြီးတစ်ခုပါ။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကျရောက်လာတဲ့ အဲဒီအဖျက်လက်နက်ရန်စွယ်တွေကနေ Justice League ကရောကယ်တင်နိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်သူတွေရဲ့အသက်တွေကို ဘယ်လိုပေးဆပ်ရဦးမှာလဲ ဆိုတာတော့....။ Credit Review
IMDB: 7.4/10 10,291 votes
Justice League Dark (2017) justice league dark ဟာ အရင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Justice league movies တွေနဲ့မတူဘဲ title အတိုင်းပဲ Dark ဆန်ပါတယ် R-rated ဖြစ်ပြီး rating 7.2 ရှိပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်ငါးရာတုန်းက မှော်ဆရာ Destiny ဟာ အိပ်မက်ကျောက်တုံး(Dreamstone) ကိုသုံးပြီး ကမ္ဘာမြေကို သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ မှော်ဆရာမာလင်ကြောင့် မအောင်မြင်ဘဲ ကျောက်တုံးထဲမှာ Destiny ဟာ ပိတ်မိ နေပါတယ် ယခုအချိန်မှာ သူဟာ အနှစ်ငါးရာကြာ အောင် အစီအစဉ်တွေနဲ့ ကမ္ဘာကိုတစ်ဖန် ပြန်သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံပါတယ် Justice League ရဲ့ မူလအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ Superman Wonderman Flash Green Lantern တို့ဟာ မှော်ပညာကို မကိုင်တွယ်နိုင်တဲ့အခါမှာ Batman ဟာ မှော်ပညာကို ...
IMDB: 7.1/10 16,642 votes